Maxkamada Ciidamada Oo Xukun Dil ah Lagu Riday Sargaal ka Tirsanaa Ciidanka Dowlada(Sawirro) | Awdalmedia.com
Maxkamada Ciidamada Oo Xukun Dil ah Lagu Riday Sargaal ka Tirsanaa Ciidanka Dowlada(Sawirro)
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday Laba xidigle xoogga dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Kumbud) oo lagu helay in uu dil bareer ah u geystay Marxuum Dayax Iimaan Xasan 21-ka bishii sagaalaad sanadkii 2018-kii.
Sargaalkan ayaa qoray dhashiike ah ku dilay Dayax Iimaan Xasan oo kamid ahaa shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir, waxaana xiliga la dilayay Dayax uu watay gaari yar oo marayay agagaarka daarta Seybiyaano.
Ciidamada amaanka ayaa gacanta kusoo dhigay sargaalkan katirsanaa ciidanka Milatariga Soomaaliya ee dilka geestay, waxaana markii dambe sargaalka la horgeeyay Maxkamada ciidamada qalabka sida.
Laba xidigle Kumbud ayaa sheegay in u jeedkiisu ahaa sidii uu u furi lahaa waddada oo aheyd Baarta jaadka halka loo yaqaano xilligaasi oo ay saxmad ka jirtay balse lagu war geliyay in ay sabatay xabadii uu riday dhimashada Marxuum Dayax Iimaan Xasan.
Maxkamada ciidamada ayaa ugu dambeyn maanta ku xukuntay eedeysane Ex, Laba xidigle Maxamed Cabdullaahi (Kumbud) dil toogasha ah oo ah qisaastii Marxuum Dayax Iimaan Xasan.
Sargaalkan katirsanaa ciidanka milatariga Soomaaliya ee xukun dilka ah lagu riday ayaa heysta fursad kale uu uga qaadan karo rafcaan Xukunka Maxkmadda Darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida.